ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုများအတွက် non-lipophilic စက်မှုအင်္ကျီ China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:non-lipophilic စက်မှုအင်္ကျီ,ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုစက်မှုအင်္ကျီ,စက်မှုအင်္ကျီကိုဆောက်လုပ်ရေး Glass ကို
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဆန့်ကျင်လက်ဗွေဖြေရှင်းချက် > ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုများအတွက် nano Coating > ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုများအတွက် non-lipophilic စက်မှုအင်္ကျီ
ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုများအတွက် non-lipophilic စက်မှုအင်္ကျီ
ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ fluorocarbon အပေါ်ယံပိုင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်
ဗဓေလသစ်။ ဆန့်ကျင်လက်ဗွေအပေါ်ယံပိုင်း Non-hydrophilic နှင့် Non-lipophilic အပေါ်ကောင်းတစ်ဦးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ သမားရိုးကျနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ
Fluorosilane, အပွန်းပဲ့ခုခံချောမွေ့အဓိကအား glassis အဘို့ကိုအလွန် improved.anti လက်ဗွေအပေါ်ယံပိုင်းပါပြီ
ထိုကဲ့သို့သောမိုဘိုင်းဖုန်းဖန်သားအဖုံးအဖြစ်မျက်နှာပြင် Anti-လက်ဗွေကုသမှုတွင်အသုံးပြု, ဖန်အကာအကွယ်
ဒါကြောင့်အပေါ်တိပ်, အီလက်ထရောနစ် display screen, optical မှန်ဘီလူးနှင့်သတ္တုနှင့် (အဆိုပါမျက်နှာပြင်ဟာအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်
အထူးသဖြင့်အမြင့်ဆုံး alumina ဆီလီကွန်ဖန်များအတွက်မထိုက်မတန်သောအရာ Anti-လက်ဗွေဖြေရှင်းချက်ကုသမှုအဘို့, ကြာရွက်ပေါ်ရေကဲ့သို့ဆန့်ကျင်ရေ, Anti-အစွန်းအထင်းများနှင့်ဆန့်ကျင်လက်ဗွေရာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု,) ကောင်းသော။
[အမြင့်စွမ်းဆောင်ရည်အင်္ကျီ features တွေ:]
1) AF အပေါ်ယံပိုင်းဖန်မူရင်း texture မပြောင်းပါသလား;
2) သာလွန်ရှိထား ကော်အင်အားစု များနှင့်ပုံစံများကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပြည့်စုံမော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံ;
3) Excellent က optical အိမ်ခြံမြေ, လင်းမြင်သာမှုနှင့်အနိမ့်ထဲမှာပါတဲ့;
4) အလွန့်အလွန်နိမ့်မျက်နှာပြင်တင်းမာမှုနှင့်ကောင်းသော Non-hydrophilic နှင့် Non-lipophilic အကျိုးသက်ရောက်မှု;
ရာသီဥတုနှင့်ဓာတုပစ္စည်းမှ 5) Excellent ကခုခံရေး;
6) မျက်မှန်သည်ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating ခံနိုင်ရည်အင်္ကျီကို Excellent ကပွန်းပဲ့ခုခံဝတ်ဆင်လျက်ရှိ၏
Anti-အစွန်းအထင်းများနှင့်ဓာတုပစ္စည်း 7) ကောင်းမွန်သောနှင့်တာရှည်ခံဝိသေသလက္ခဏာများ,
8) Glass ကိုအင်္ကျီအောက်ပိုင်းပြောင်းလဲနေသောပွတ်တိုက်ကိန်း, အရည်အသွေးမြင့်မားလက်ခံစားချက်ဖြစ်ပါတယ်။
[ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating သည် Glass ကိုစွမ်းဆောင်ရည် parameter သည်ရည်ညွှန်း]
[Nano Coating တစ်ဦးက pplication နည်းလမ်းများမှုတ်ဆေးဘူး]
၏ 1. အဘိတ် တစ်ဦး nti-လက်ဗွေဖြေရှင်းချက်: ကနှင့်အတူရောလျက်ပြီးနောက်သုံးနိုငျ
သင့်လျော်သောအရည်ပျော်ပစ္စည်း, အ dilution အချိုး 0.1 ~ 1% (ဒြပ်ထုအချိုး) အဖြစ်အကြံပြုသည်ယင်း
အကြံပြု diluents (အရည်ပျော်ပစ္စည်း) တို့ပါဝင်သည်:
² HFE-7200, HFE-7100 3M စသည်တို့ကို၏,
SICONG ဓာတုပစ္စည်းများ² Hydrofluoroether စီးရီး F-8601 ။ F-8602 ။ F-8603 ။ F-8608 ။ F-8615 စသည်တို့ကို
ထိုကဲ့သို့သောဒါအပေါ် perfluorohexane, Perfluoroheptane, Perfluorooctane နှင့်အမျှ² Perfluorinated alkanes,
0.1 ~ 1% (ဒြပ်ထုအချိုး) အဖြစ် diluent နှင့်အတူရောသောဤထုတ်ကုန် (F-1091G) မှအဆိုပါဖြေရှင်းချက်ကို, အရံအတွက်ပြင်ဆင်ထားသည်။ အဆိုပါပြင်ဆင်ထားဖြေရှင်းချက်ကောင်းစွာအလုံပိတ်ဖြစ်နှင့်လေကြောင်းနှင့်အတူကြာရှည်ထိတွေ့မှုမှရှောင်ရှားခြင်းနှင့်အစိုဓာတ်ကိုတားဆီးခြင်းနှင့်အနိမ့်အပူချိန်မှာသိမ်းဆည်းထားသင့်ပါတယ်။ အပြင်ကိုပြင်ဆင်ဖြေရှင်းချက် ASAP ကိုအသုံးပြုရပါမည်။
2. ပစ္စည်း Coating အသုံးပြုခြင်း:
1 ထိုကဲ့သို့သော floating ဖုန်မှုန့်, ပြာသိုက်, အမဲဆီစသည်တို့အဖြစ်, အဆိုပါအခြေစိုက်စခန်းပစ္စည်းမျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းခန်းခြောက်စေသော ultrasonic သို့မဟုတ်ပလာစမာစက်နဲ့ကုသခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်နှင့်မျှမညစ်ညမ်းရှိပါတယ်
ဒီထုတ်ကုန် (F-1091G) ၏ diluent အသုံးပြုတဲ့အခါ 2, method ကိုပက်ဖြန်းသို့မဟုတ်နည်းလမ်းစိမ်, အပေါ်ယံပိုင်းနည်းလမ်းချမှတ်ခြေရင်းပစ္စည်းမျက်နှာပြင်ဆက်ဆံဖို့လိုအပ်တယ်, နှင့် (ကုသပေးဖို့ထက်ပိုမို 10 နာရီများအတွက်အခန်းအပူချိန်မှာအပူပိုင်း) အလုံအလောက်တင်နိုင်အချိန်ပေးရမည်, သို့မဟုတ်အနည်းငယ် minutes` 120-150 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်, မီးဖိုနှင့်အတူ 30 မိဘို့ရောဂါပျောက်ကင်းဖို့, အခန်းအပူချိန်မှာရပ်နေပြီးနောက်; ဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းသည်နှင့်အညီကိုယ့်ကိုယ်အားဖြင့်အကောင်းဆုံးတင်နိုင်အစီအစဉ်ကိုအတည်ပြုပါ။ သို့မဟုတ် PVD အပေါ်ယံပိုင်းအားဖြင့်အခြေခံပစ္စည်းမျက်နှာပြင်မှမူရင်းဖြေရှင်းချက်သက်ဆိုင်ပါသည်။
ခြေရင်းပစ္စည်းပျောက်ကင်းအောင်ကုသပြီးနောက် 3, ပိုလျှံ Anti-လက်ဗွေဖြေရှင်းချက်သို့မဟုတ်အညစ်အကြေးကိုပယ် clean, ဒါမှမဟုတ် dustless အထည်ကို အသုံးပြု. ပိုလျှံထုတ်ကုန်ချွတ်ရှင်းလင်း ultrasonic ကိုအသုံးပြုပါ။
, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစဉ်အတွင်းနေရောင်ခြည်မထိတွေ့တိုက်မှုနှင့်ဆှဲရှောင်ကြဉ်ပါ, ဘုံအန္တရာယ်ကုန်ပစ္စည်းများအဖြစ်ပို့ဆောင်။
အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့်စတိုးဆိုင်တစ်ဦး, အေးမြခြောက်သွေ့သောအရပ်လေဝင်လေထွက်အတွက်အစိုဓာတ်ကို-အထောက်အထားနှင့်ရေစိုခံမကွာမီးနှင့်အပူအရင်းအမြစ်မှထားပါ။ moistureproof ရန်လိုအပ်ပါတယ်
သုံးပြီးသောအခါမျက်စိနှင့်အဆက်အသွယ်များကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ရေပြေး၏ပဒေသာနှင့်အတူချက်ချင်းဆေးကြောပါအကာအကွယ်လက်အိတ်များနှင့်မျက်မှန် Wear နှင့်ဆရာဝန်တစ်ဦးကိုတွေ့မြင် 1. ;
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : ဆန့်ကျင်လက်ဗွေဖြေရှင်းချက် > ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုများအတွက် nano Coating
ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုများအတွက်ချောမွေ့မှုဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုများအတွက် anti-အစွန်းအထင်းက Surface AF Coating အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုများအတွက်အရောင်မဲ့ AF Coating အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုများအတွက်အဝါရောင် Transparent AF Coating အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အနိမ့်တဲ့ Surface တင်းမာမှုဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating ရေမှုံရေမွှား အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုအတှကျကောငျးက Non-hydrophilic ကုတ်အင်္ကျီ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုများအတွက် non-lipophilic စက်မှုအင်္ကျီ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မျက်မှန်အဘို့အနိမ့်ထဲမှာပါတဲ့ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
non-lipophilic စက်မှုအင်္ကျီ ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုစက်မှုအင်္ကျီ စက်မှုအင်္ကျီကိုဆောက်လုပ်ရေး Glass ကို စက်မှုအင်္ကျီ ကောင်းသောက Non-hydrophilic စက်မှုအင်္ကျီ glass ကိုအင်္ကျီ အရည်အင်္ကျီအေး leather စောင့်ရှောက်မှုစင်္ကာပူ